कम्प्यूटर, इन्टरनेट र म
एस. एल. सी. अर्थात प्रवेशिका परीक्षापछि नतिजा प्रकाशित हुन्ज्यालसम्मको करिब साढे तीन महिनाको फुर्सदमा कम्प्युटर चलाउन सिक्ने चलन भर्खर शुरू हुँदै थियो । त्यहि छेकोमा मैले पनि कम्प्युटर सिक्ने अवसर पाएथेँ । घरबाट ७ किलोमिटर टाढा रहेको बागलुङ बजारमा रहेका एक नातेदारको कम्प्युटर शिक्षणालयमा म अरू २ जना हितैषीहरूसँग कम्प्युटर सिक्न जान्थेँ । बाले इन्सिच्युट नजिकैको चियानास्ता पसलमा कम्प्युटर सिकेपछि खाजा स्वरूप चिया बिस्कुट खाने ब्यवस्था गर्दिनुभएको थियो । एक प्याकेट नुनिलो बिस्कुट र एक कप चिया खाएर साढे २ महिना जति मैले कम्प्युटर सिकेँ । कम्प्युटर सिक्दा किबोर्डमा भएका अक्षर नहेरी टाइप गर्ने प्रशिक्षक देख्दा, मनमनै लाग्थ्यो कि मैले पनि उनले जस्तै कहिले सम्म टाइप गरूँला ? अतः देब्रे हातको कान्छी औंलामा ए, साइलीमा एस, माझीमा डि, यस्तै गरी अरू औंलामा अरू अक्षरहरू लेखेर टाइपिङ क्षमतालाई निखार्ने मेरो प्रयास रहन्थ्यो । पछि प्रशिक्षकले टाइपशालाको रामायण खेल खेल्न सिकाए, जुन खेलले मेरो टाइपिङमा धेरै सुधार ल्याउन मद्दत गर्यो ।
टाइपिङमा अलिकति अभ्यस्त हुन थालेपछि मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल, पेजमेकर सिकेको थिएँ । पछिपछि त पेजमेकरमा पत्रिकाको डिजाइन पनि गर्न थालेँ । अलिपछि मैले कम्प्युटरमा इन्टरनेटको प्रयोगका बारे जान्न थालेपछि हटमेलमा एउटा इमेल ठेगाना बनाएँ । २० बर्षको उमेरमा पुग्दै गर्दा मैले पहिलोपटक इमेल इन्टरनेटका बारे थाहा पाएको थिएँ । आज फर्केर हेर्दा त्यहि दिनदेखि मैले भर्चुअल दुनियाँमा रम्ने लतको विकास गरेकी भन्ने लाग्दछ । कुनै पनि सेवा सुविधाको उचित प्रयोग र अति प्रयोगले मानिसको जीवनमा छुट्टै तरिकाले प्रभाव पार्दो रहिछन् भन्ने बुझ्नलाई मैले १३ बर्ष खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बनेछ ।
म सामाजिक संजालमा हामीले बिताउने समयले लाभभन्दा धेरै हानी नै पुर्याउँछ भन्ने निचोडमा पुगेको छु । यस्तो निचोडमा पुग्नुका केहि कारणहरू छन् । तीनलाई म बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्ने प्रयास गर्दछु ।
१. फरक एवं झुटो व्यक्तित्व
सामाजिक संजालमा अधिकांश मानिसहरू आफूहरूलाई फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन । साथै, अर्को ब्यक्तिलाई पनि फरक ब्यक्तित्वका रूपमा स्वीकार गर्न विवश छन । सामाजिक संजालमा हामीहरू वास्तविक जीवनमा जे जस्ता छौं या हुन्छौं त्यो रूपमा नै प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनौं । सक्दैनौ पनि । यसले हाम्रो व्यक्तित्वलाई निर्माणभन्दा ध्वंस गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
२. सामाजिक संजाल - कुण्ठा बिसाउने चौतारी
सामाजिक संजाल धेरै मानिसहरूका लागि घृणा, आवेग, फरक मत, निन्दा, भत्सर्ना, कुण्ठा एवं निराशा पोख्ने ठाउँ बनेको छ । केहि हदसम्म म स्वंयलाई नै महशुस हुने गरी स्वंयले त्यस्ता पीडादायी अनुभवहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको छु । यसले केहि हदसम्म ब्यक्तिमा रहेको निराशाको भावबाट मुक्त हुने अवसर त देला तर आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि मैले पोख्ने निराशाहरूले त्यो ग्रहण गर्ने ब्यक्तिलाई चैं मलाई जत्तिकै आनन्ददायक अनुभूति दिने निश्चित गर्न सकिदैन । त्यस्तै, विभिन्न मिडियामा प्रकाशित समाचारहरूलाई आधार मानेर कुनै पनि विषयको पक्ष या विपक्षमा रहेर बहस गर्दा कहिल्यै पनि ठोस निश्कर्षमा पुग्न नसक्ने स्थिति बन्दो रहिछ ।
३. नभएको ठाउँमा हुनू र भएको ठाउँमा नहुने स्थिति
भर्च्युल दुनियाँमा व्यस्त हुँदै गर्दा हामीले हाम्रै वरिपरी हुने गरेका घटनाहरूमा उति चासो नराख्दा रहिछौं । मेरै व्यक्तिगत अनुभवमा पनि सामाजिक संजालमा अत्याधिक सक्रियताले मैले मेरो आफ्नो जिन्दगी बाँच्न नै बिर्सिन थालिसकेको रहिछु । निन्द्राले छाड्दा बितिकै फेसबुकमा कसले के लेखे ? कसले मेरो सम्प्रेषणमा के टिप्पणी दियो ? इन्स्टाग्राममा कसले के खाएको या लगाएको तस्वीर राख्यो ? यस्तै यस्तै अनावश्यक गतिविधीहरूमा व्यस्त हुँदै जान थालेछु । तर आफ्नै वरिपरी भएका परिवारका सदस्य या साथीभाईहरू के भनिरहेछन् ? के चाहिरहेछन् ? के खोजिरहेछन् ? भन्नेमा ध्यानै नजादो रहिछ । अझ महत्वपूर्ण त मेरो आफ्नो आवश्यकता के हो ? मैले गर्नुपर्ने के छ ? भन्ने विषयमा सोच्नै छाडिदै गइदो रहिछ ।
प्रवेशिका परीक्षा पछिको फुर्सदको समयलाई कम्प्युटर सिक्नमा प्रयोग गर्नु मलाई मेरो जिन्दगीभरी कै एक महत्वपूर्ण निर्णय लिएँ भन्ने लाग्दै गर्दा इन्टरनेटको दुनियाँमा अनावश्यक लत पार्दै जानु चाँहि दुःखद गल्ति गरेको महशुस भैरहेको छ । यसर्थः सामाजिक संजालमा अभ्यस्त भैराख्ने लतमा नपरियोस् भन्ने हेतूले केहि समय पहिलादेखि मैले यसको प्रयोगलाई कम गर्दै मात्र ल्याएको छैन कि पूर्ण रूपमा यसको प्रयोग नै नगर्ने निचोडमा पुगेको छु ।